पूजा र आकाश प्रेममा चुर्लुम्म ! (भिडियो) « Ramailo छ
पूजा र आकाश प्रेममा चुर्लुम्म ! (भिडियो)
समय : 7:42 pm
सुदर्शन थापा निर्देशित फिल्म ‘रामकहानी’को दोस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । रिलिकल भिडियोसहितको गीतले मुख्य पात्र पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको प्रेम वर्णन गरेको छ । रोमान्टिक स्याड भर्सन गीतमा अर्जुन पोखरेलको शब्द/संगीत तथा अन्जु पन्त र सुगम पोखरेलको स्वर छ ।
यसअघि सार्वजनिक एक गीत, ट्रेलर र पोस्टरबाट उच्च हाइप सिर्जना गरेको फिल्म बक्स अफिस र दर्शकका लागि प्रतिक्षित छ । फिल्ममा केदार घिमिरे, जितु नेपाल, विल्सनबिक्रम राई, रविन्द्र झा, राजाराम पौडेल, शिशिर राना, बिशाल पहारी, सुनिता श्रेष्ठ ठाकुर, सोभित बस्नेतलगायतका कलाकारको पनि अभिनय छ ।
कमेडी लभस्टोरी फिल्ममा महेश दवाडी र दिनेश न्यौपानेको पटकथा/संवाद रहेको फिल्ममा अर्जुन पोखरेलको शब्द/संगीत, सौरभ लामाको छायाँकन, बनिष शाह/मिलन श्रेष्ठको सम्पादन र कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी छ ।